Ukudaya iinwele ezingwevu | Amadoda aQinisekileyo
Ukudaya iinwele ezingwevu
UAlicia tomero | | Ukunyamekela, Isitayile esinenwele
Sele sikuxelele kwelinye lamanqaku ethu ukuba njani Iinwele ezingwevu zithathe indawo enkulu yokutsiba. Yimpumelelo enkulu kubafazi kunye namadoda afuna ukunxiba lo mbala, njengoko kuphawula kakhulu ubuntu.
I-Ash grey hair ngumthunzi onika inkangeleko enobunono kunye nenhle, Ihlala phakathi kwee-shades ezahlukileyo ezingwevu, ayibi ngwevu imnyama, ingwevu ukukhanya, okanye isilivere. Ukuba uthanda ukukhetha lo mbala, kuya kufuneka uchaze indlela yokuwulawula, ufumane ingcali kwaye ikunike isikhokelo ekufuneka usilandele.
Ukuba uthatha isigqibo sokwenza ekhaya ngoncedo oluncinci, unazo neengcebiso ezilungileyo ukuze ukwazi ukuziphumeza. Siza kuncoma zonke izinto oza kuzifuna kunye nonyango olulandelayo Kuya kufuneka ufake isicelo sokukhathalela iinwele kunye nombala.
1 Vavanya ukuba ngaba ungadaya iinwele zakho
2 Nokuba ngaba iinwele zakho ziyamelana nokukhanya
3 Isetyenziswa njani iblitshi ezinweleni?
4 Ukufaka idayi yeenwele ezingwevu
5 Unonophelo olulodwa emva kokudaya iinwele ezingwevu
Vavanya ukuba ngaba ungadaya iinwele zakho
Kuqala kufuneka uyenze uvavanyo lokuba iinwele zakho zikulungele na okanye uya kuba nakho ukoyisa inkqubo yokubuna. Kuya kufuneka ulwazi uhlobo lombala wendalo onenwele yakho kwaye unokuzibeka ezandleni zengcali ukuyivavanya.
Ngokusekwe kule datha, kuya kwenzeka ukuba misela ukuba zingaphi iiblitshi ezinwele zakho eziya kuzifuna ukufezekisa i-platinum blonde (ukutshintsha umbala). Lo ngumbala oya kuthi uphunyezwe kuqala ukuze ube nakho ukunika umbala ongwevu ofuna ukuwusebenzisa.
Inyathelo lesibini yile vavanya ukuba iinwele zakho ziya kumelana nomthamo we-peroxide Oko kuyakusetyenziselwa ukuzisa umbala, kuba ngokuhamba kwexesha iinwele ziba buthathaka kwaye zibe krwada. Njengokuba iiveki zihamba, iinwele zabo ziba buthuntu kwaye zonakaliswe ngenxa yolu nyango olugqibela ukohlwaya uninzi lwazo.
Nokuba ngaba iinwele zakho ziyamelana nokukhanya
Inkqubo yokwenza iblitshi inokuba nzima kwaye inde. Kuxhomekeke kudidi lwakho lombala weenwele inokufuna ukubonwa okungafaniyo, eziyimfuneko ukufezekisa ithoni yokukhanya efunekayo. Ukuba uneenwele ezibuthathaka kwaye kufuneka uzenze Kuya kufuneka uyenze ngeeseshoni kwaye umbala omnyama uhlala iiveki.
Inkqubo ethatha elona xesha lide iyakwenziwa nge-bleaching kwaye siya kulinda iinwele ukuba zibuyiselwe iintsuku ezimbalwa kude kube yinto elandelayo yokukhanya Ngale ndlela siya kufumana iinwele ukuba ziziqhelanise kwaye akufuneki ukuba siphule umbala omnye omkhulu.
Isetyenziswa njani iblitshi ezinweleni?
Ukuguqulwa kombala kuya kuba nezinto ezimbini eziphambili: i-bleach powder kunye nesisombululo okanye isilumeki, ihydrogen peroxide (i-hydrogen peroxide, iboniswe ngokwamanani). Ukuba uneenwele ezikhanyayo uzakufuna i-activator yevolumu eyi-10, ukuba iinwele zakho zimnyama blonde ivolumu iya kuba ngama-20, ukuze umbala omdaka ngombala uya kufuna ivolumu yama-30 kwaye kwizinwele ezimnyama okanye ezimnyama uya kufuna ivolumu yama-40.
Kuya kufuneka udibanise zombini iimveliso, ubukhulu bukholisa ukuboniswa kwimiyalelo, nangona kuyinto eqhelekileyo ukuxubeka kwiindawo ezilinganayo. Siqala ukubeka umxube wethu ezinweleni ngoncedo lwebrashi kunye neesentimitha ezi-4 ukusuka kwingcambu.
Kuya kufuneka usebenzise i-bleach ngokwamacandelo kwizinwele zakho ukuze kube lula kuwe ukwenza njalo. Kufuneka linda imizuzu engama-25, de ubone ukuba iinwele zijika zibe-orenji. Emva koko, siphinda sisebenzise lo mxube, kodwa ngeli xesha ezingcanjini. Siyayiyeka phumla eminye imizuzu engama-25 de iinwele zikhanyiswe.
Okokugqibela iya kuvunyelwa enye imizuzu engama-25. I-bleach iya kususwa ezinweleni ngamanzi amaninzi, iya kuhlanjwa kakuhle kwaye ishampu ethile yeenwele ezimhlophe iya kufuneka. Imveliso eza kusetyenziswa iya kuba ngombala omfusa.
Le toner ilungisa umbala we-hue etyheli kwaye iyisondeza kakhulu kumhlophe wendalo. Kukho imibala esetyenziswe ngendlela efanayo nedayi, ngebrashi, ukusuka ezingcanjini ukuya kwiingcebiso. Shiya imizuzu engama-20 kwaye uvale iinwele ngekepusi ngoko akukho kuchitheka. Ekugqibeleni uhlambe iinwele zakho ngamanzi amaninzi.
Ukufaka idayi yeenwele ezingwevu
idayi, ishampu kunye nemaski
Ukusetyenziswa kwayo, iinwele kufuneka zome ukuba uza kusebenzisa idayi esisigxina. Ukuba uza kusebenzisa idayi esisigxina iya kufuna kuphela ukuba ibe-semi-moist. Lungisa umxube wokuhenda kwisitya. Kuya kufuneka ufake ipetroleum jelly kwindawo leyoNdiyazi ukuba awufuni ukuba idayi ifike kuwe. Ngoncedo lwebrashi Yisebenzise kuyo yonke iinwele zakho kwaye ushiye malunga nemizuzu engama-30.
Ke hlamba yonke idayi ngamanzi amaninzi, ude ubone ukuba wonke umbala uphuma kwaye uphuma ucoceke ngokupheleleyo kwaye hlamba iinwele zakho ngeshampu ekhethekileyo yeenwele ezimhlophe.
Unonophelo olulodwa emva kokudaya iinwele ezingwevu
Ngomhla wakho kubalulekile ukuba ulandele amanyathelo ambalwa okuqhubeka nokugcina ithoni kunye ne-hydration yeenwele. Akululanga ukusebenzisa nayiphi na ishampu, kuba oku kufuneka Sebenzisa ishampu ekhethekileyo yokukhathalela iinwele kunye ne-hydration kwaye igcina umbala ixesha elide.
ishampu ezinwele ezimhlophe kunye nezinto zokugaya
Akukho mfuneko yokuba uhlambe iinwele zakho yonke imihla, kodwa yenze rhoqo ukuze uhlale unamanzi. Imaski iyacetyiswa ukuba uyisebenzise kube kanye ngeveki ukunika idosi eyongezelelweyo yokuhambisa amanzi. Kwaye into ebaluleke kakhulu kukuthintela imithombo yobushushu (isomisi okanye iirons) kuba zisiba mbi ngakumbi iinwele.
Ukuba nombala weenwele ongenakonakala kuyacetyiswa ukuba wenze thinta idayi, ubuncinci rhoqo kwiiveki ezintathu ukuya kwezine, ukuze umahluko wemibala ungabonwa ukusuka ezingcanjini ukuya ezinweleni. Oko kuya kukukhokelela ekubuyiseleni esalon kwaye ndikunike iseshoni entsha, okanye ngamanyathelo esikufundise wona, yenze ekhaya.
Sele siqaphele ukuba ukudaya iinwele zakho ezingwevu yifashoni enokuthi ibe nokufikelela kuweAkukho nzima ukuyenza kodwa akukho lula ukuyigcina kwaye kungabizi kakhulu. Amalungiselelo akhethekileyo kunye neemveliso ezithile ziyafuneka kwesi siphumo sihle, kodwa umzamo wakho uya kufaneleka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ukudaya iinwele ezingwevu
Ungayenza njani imvume yamadoda
Ifashoni eqhelekileyo emadodeni